MUM 2015 & 2016 Activities
Miss Universe Myanmar 2015 & 2016 ပြိုင်ပွဲဝင်ဆန်ကာတင်အလှမယ် (၂၀)ဦးသည် လူမှုရေး ခရီးစဉ်အဖြစ် စက်တင်ဘာလ(၈)ရက် နေ့တွင် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ချောင်းသာကမ်းခြေသို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး ညနေပိုင်းတွင် လေးယောက်တွဲ အုပ်စု(၅)စုခွဲကာ ဟင်းချက်ပြိုင်ပွဲက
MUM 2015 & 2016 ပြုလုပ်မည့် အစီအစဉ်
• Miss Universe Myanmar 2015 & 2016 ပြိုင်ပွဲ
ကျင်းပမည့် နေ့ရက် -3October 2015
ကျင်းပမည့် အချိန် - 6:00 PM
ကျင်းအမည့် နေရာ - Gandamar Grand Ballroom
MUM 2015 & 2016 Top 20 Finalist စာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနား
Miss Universe Myanmar 2015 & 2016 Top 20 Finalist များအား
Miss Universe Mawlamyaing 2015 - Ei Phyo Thwe
Miss Universe Mawlamyaing 2015 ကို Ei Phyo Thwe မှ ဆွတ်ခူးသွားပါသည်.....
Welcome to the Miss Universe Myanmar 2015 Contest in Yangon!
Miss Universe Mawlamyaing • Ei Phyo Thwe
Miss Universe Myeik 2015 - Win Nwe Oo
Miss Universe Myeik 2015 ကို Win Nwe Oo မှ ဆွတ်ခူးသွားပါသည်.....
Miss Universe Myitkyina 2015 - Oilaw Nang latt Seng Mai
Miss Universe Myitkyina 2015 ကို Oilaw Nang latt Seng Mai မှ ဆွတ်ခူးသွားပါသည်.....
Miss Universe Taunggyi 2015 - Yoon Shwe Hlwar
Miss Universe Taunggyi 2015 ကို "ရွှေယွန်းလွှာ" မှ ဆွတ်ခူးသွားပါသည်.....
Miss Universe Dawei 2015 - Yuzana Htun
Miss Universe Dawei 2015 ကို Yuzana Htun (No.15) မှ ဆွတ်ခူးသွားပါသည်.....
Miss Universe Mogok 2015 - Nadi Hlaing
Miss Universe Mogok 2015 ကို Nadi Hlaing ( No. 18) မှ ဆွတ်ခူးသွားပါသည်.....
Welcome to the Miss Universe Myanmar 2015 Contest in Yangon !
Miss Universe Pyay 2015 - Kay Khaing Myint
Miss Universe Pyay 2015 ကို Kay Khaing Myint ( No. 19) မှ ဆွတ်ခူးသွားပါသည်.....
Miss Universe Myanmar Organization မှ သွားရောက်လှူဒါန်းမည့် ရေဘေးသင့် ပြည်သူများအတွက် ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးကူညီရန် စေတနာ သဒ္ဓါတရား ထက်သန်စွာဖြင့် လှူဒါန်းပေးပါရန် အလှူရှင်များအား ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်း ၀၁ ၃၉၃၁၀၂၊ ၀၁ ၃၉၂၀၉၉
Miss Universe Lashio 2015 - Nann Ngwe Hnin Mhone
Miss Universe Lashio 2015 ကို Nann Ngwe Hnin Mhone မှ ဆွတ်ခူးသွားပါသည်.....
Miss universe Bago 2015 - Khun Nay Kyi Cho
Miss Universe Bago 2015 ကို Khun Nay Kyi Cho မှ ဆွတ်ခူးသွားပါသည်.....
Miss Universe Myanmar 2015 နှင့် Miss Universe Myanmar 2016 တို့အား တစ်ပြိုင်နက်ရွေးချယ်သွားမည်
၂၀၁၅ခုနှစ် အောက်တိုဘာ (၃)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် Miss Universe Myanmar ပြိုင်ပွဲ၌ Miss Universe Myanmar 2015 နှင့် Miss Universe Myanmar 2016 တို့အား တစ်ပြိုင်နက် ရွေးချယ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါအလှမယ်များသည် Miss Universe Myanmar 2015 နှင့် Miss Univers
City Director List 2015
Miss Universe Myanmar Organization မှ ကြီးမှူးကျင်းပမည့် Miss Universe Myanmar 2015 တွင် မြို့ကြီးများမှ ကိုယ်စားပြုအလှမယ်များ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရန် တာဝန်ယူဆောက်ရွက်လိုသည့် City Director များအား အဆိုပြုသည့်မြို့များအလိုက် ခန့်အပ်ခဲ့ရာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွက်
Miss Universe Pathein 2015 - Angel May
Miss Universe Pathein 2015 ကို Angel May မှ ဆွတ်ခူးသွားပါသည်.....
Miss Universe Sittwe 2015 - Cho Cho Tun
Miss Universe Sittwe 2015 ကို Cho Cho Tun မှ ဆွတ်ခူးသွားပါသည်.....
Miss Universe Mandalay 2015 - Han Lay
Miss Universe Mandalay 2015 ကို Han Lay မှ ဆွတ်ခူးသွားပါသည်.....